Irma, oke ifufe ohuru ohuru nke na-aga na Caribbean | Netwọk Mgbasa Ozi
Irma, oke ifufe ohuru ohuru nke na-aga na Caribbean
Naanị mgbe onye ọ bụla ka nwere nke a nsonaazụ nke Hurricane Harvey hapụrụ ka ọ gafere Texas, ajọ ifufe ọhụrụ, emere baptism nke aha Irma, ọ na-aga Caribbean. Na o kwere omume iru United States, ọ bụ nke ajọ ifufe a maara nke ọma a na-akpọ «hurricane Cape Verde».
A na-akpọ ụdị ajọ ifufe ndị a aha n'ihi na ha na-etolite na nsọtụ ọwụwa anyanwụ nke Atlantic, na nso agwaetiti Cape Verde. Na-agafe n'ofe Atlantic, ajọ ifufe nke Cape Verde ha na-achọ ịpụ maka ụfọdụ n'ime ajọ ifufe ndị kasị ukwuu na nke kpụ ọkụ n'ọnụ. Enwere ike ịchọta ihe atụ nke a na Hurricane Hugo, nke ruru ụdị 5, nke metụtara Puerto Rico, Saint Croix na South Carolina, na-ahapụ nnukwu mbibi na 1989. Ihe atụ ọzọ bụ Hurricane Iván na 2004 nke ụdị 5, yana Ike "a na-enwetụbeghị ụdị ya" na obere ala ikuku na ikuku kachasị nke 275km / h.
1 Irma bụ ajọ ifufe nwere ike ibibi ihe
2 Puerto Rico na-akwado
3 Namesnye na-akpọ ajọ ifufe aha?
Irma bụ ajọ ifufe nwere ike ibibi ihe
Ajọ Ifufe Irma ugbu a
A kpọrọ Irma oke mmiri ozuzo n'ụtụtụ Wednesde a. Site n'ehihie Tọzdee, ọ bụ ajọ ifufe 3 nke Atiya, na ifufe nke 185km / h. Ihe mgbawa mgbawa a maara dị ka "mmụba ngwa ngwa.", dị ka a kọwara ya Hurlọ Ajọ Ifufe Mba. A na-enye aha a mgbe mmụba nke ikuku ikuku dịkarịa ala 56km / h na-erughị awa 24.
N'okwu Harvey, anyị nwere ike ịhụ otu ihe a. O nwere ịrị elu ngwa ngwa tupu ọ rute na ọdịda, na-ebuli ya na udi 4 mgbe ọ kwagara n'akụkụ Corpus Christi. Agbanyeghị, agbanyeghị na enwere ike ịtụ anya na ọ ga-abawanye, mmadụ ole na ole gaara ekwu na ọ ga-erute oke ike a tupu, mgbe a tụrụ anya na ọ nwere ike iru otu 1, na ọtụtụ 2. Mgbe ụfọdụ, oge ikpeazụ na-akpata nnukwu mgbanwe , ma n'oké ifufe na ihe ndị ọzọ gbasara ihu igwe.
Maka Irma, amụma ndị dị ugbu a na nke sitere na National Hurricane Center na-egosi nke ahụ ga na-esiwanye ike ka ị na-aga ọdịda anyanwụ maka ụbọchị ise sochirinụ. O kwere omume na site na Tuesday a, ọ ga-abụrịrị ajọ ifufe 4. Atiya a, na Saffir-Simpson, nwere ọsọ ikuku site n'agbata 210 na 249km / h, yana nrụgide dị n'etiti 920 na 944 millibars. Ihe mmebi nwere ike zuru ebe niile na ụlọ nchedo, ọdịda ụlọ na obere ụlọ, na idei mmiri na mpaghara dị n'ime, dịka Harvey.
Amụma Irma maka ụbọchị Tọzdee na-esote ụbọchị 7
Puerto Rico na-akwado
Agbanyeghị na ọ gaghị ekwe omume ịmata nke ọma ma ọ bụrụ na Ajọ Ifufe Irma ga-erute Puerto Rico, obodo agwaetiti Culebra na-akwadolarị, na-eche na ọ ga-eme. Onye isi obodo Williams Iván Solís kwuru, «Anyị enweghị ike ịtụkwasị ibe anyị obi. Anyị na-agba ndị mmadụ ume ịkwadebe. Ka anyị chere ruo oge ikpeazụ ». Onye isi obodo ahụ na-egosikwa na ọ bụrụ na ajọ ifufe ahụ mechara mesịa metụta Puerto Rico, a ga-achụpụ ebe enwere osisi na zinc, yana ụlọ ndị na-agagharị agagharị.
Na-eburu n'uche amụma nke National Hurricane Center, Irma nwere ike ịgafe n'ebe ugwu nke Puerto Rico n’agbata Wenezdee na Tọzdee n’izu sochirinụ dị ka “ajọ ifufe”. Site na ifufe karịrị 178km / h nke ga-abụrịrị ụdị 3. "Ya mere na ọdachi adabaghị, anyị ga-akwado dịka anyị si akwado kwa afọ", Solís mara ya ikpe.
Namesnye na-akpọ ajọ ifufe aha?
Kwa afọ, a na-akwado aha na aha ndị ajọ ifufe na-efe n'oge oge niile. Ndepụta ndị a nke a na-emeghachi kwa afọ isii ọ bụla, gụnyere aha maka mkpụrụedemede ọ bụla (ịghara ịgụta mkpụrụedemede Q, U, X, Y na Z) na aha nwoke na nwanyị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, n'ime afọ a, oge ifufe malitere site na Arlene, n'April, na-amalite aha ya bụ A. Harvey, nke bụ H, leta na-esote ga-abụ m, n'ihi ya Irma na-esote.
Mgbe oke ifufe na-ebibi ihe na mba, a na-ewepụ aha ya wee dochie ya. Enweghi ike iji aha gị mee ihe maka afọ 10 sochirinụ iji zere ọgba aghara. N'ụzọ dị otú a, site n'ịkpọ aha ajọ ifufe site na aha, ọ nwere ike ịchọta ya ngwa ngwa na ịdị mfe n'oge. Emepụtara usoro a na 1953 site na National Hurricane Center, na United States.
Anyị ga-ekwupụta ihe omume ọ bụla na mgbanwe Irma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Irma, oke ifufe ohuru ohuru nke na-aga na Caribbean
Mpaghara nke ka Denmark dị na Amazon mara mma maka nsị
Mangroves Vietnam bụ ọta megide mgbanwe ihu igwe